Ezi ziifowuni nge-Android One eboniswe kwi-MWC 2018 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, MWC, Iinguqulelo ze-Android
I-Android One yenye yeeprojekthi zikaGoogle zokukhuthaza ukusetyenziswa kwenkqubo yokusebenza. Inguqulelo yenkqubo yokusebenza yasimahla ye-bloatware kunye nolwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso. Iimpawu ezifana neNokia ziyayisebenzisa. Okanye iifowuni ezinje ngeXiaomi Mi A1. Ngoku, Ngeli xesha le-MWC 2018 iifowuni ezintsha zongezwa kwinkqubo. Ukusuka kwinto esiyibonayo ukuba iya kukhula njani i-Android One.
Iimpawu ezingakumbi nangakumbi zifuna ukubheja kwiifowuni ngaphandle kokwenza ulwenziwo lomntu. Kwaye kwesi siqalo se-MWC 2018 ezinye zeefowuni ezintsha eziza kuyisebenzisa le nguqulo zityhiliwe yenkqubo yokusebenza.
Kungenxa yoko, Kulungile ukubonisa kuluhlu zonke iimodeli ezintsha eziza kusebenzisa i-Android One. Ke, abasebenzisi banokufunda ngakumbi ngezi fowuni ziya kuthi zifike kwintengiso kwiinyanga ezizayo. Ilungile ukuba ukhangele ifowuni ekhululekile kulungelelwaniso lokwenza ngokwezifiso.
1 INokia 8 Sirocco
4 Ezinye iifowuni ze-Android
Enye yeflegi entsha yohlobo, eboniswe izolo. Ifowuni apho uphawu luhlawula imbali yayo kwaye lujonga kwikamva. Sijongene nenye yezona zixhobo zigqibeleleyo ezithi zisungulwe kwimarike. Yintoni egqithisile, Njengesiqhelo kwiNokia, isebenzisa i-Android One. Ke sinokuhlala silindele uhlaziyo olukhawulezayo.
Okwesibini kuza ifowuni yeflegi entsha. Sisixhobo esinento yonke yokoyisa abasebenzisi. Ukusuka kuyilo lwangoku kakhulu ukuya kwinkcazo elungileyo. Ngapha koko, inyani yokuba usebenzisa i-Android One ikwaqinisekisa ukuba uza kuhlaziya ngokukhawuleza. Kwakhona a ukwanda kobukho boMncedisi kaGoogle kwisixhobo. Ke abasebenzisi baya kuba nazo zonke izibonelelo.
Kwindawo yesithathu bubungakanani obuphakathi kwebrendi. Ifowuni efikelela kwintengiso kwicandelo elinzima kodwa apho uphawu lwenza kakuhle kakhulu. Ke ngokuqinisekileyo inokuthandwa ngabasebenzisi. Ifowuni ebhejela kuyilo kunye ne iprosesa esemgangathweni njengeSpapdragon 630. Inketho elungileyo kwabo bafuna ifowuni nge-Android One efikelelekayo ngakumbi.
Ezinye iifowuni ze-Android
Ezi zintathu zezona zakutshanje ukuba yinxalenye yosapho lwe-Android One.Nangona sele zikho nezinye iifowuni ezikhoyo namhlanje. Ke siyayibona indlela ekhula ngayo usapho. Sifumana iimodeli ezinje ngeXiaomi Mi A1, iHTC U11 Life okanye iMoto X4 phakathi kwazo.
Sikwafumana uninzi lweemodeli ezibukhali kuluhlu. Ngaphandle kweMotorola. Ukusuka kwinto esinokubona ukuba zininzi izinto ezahlukeneyo ngaphakathi kwi-Android One.Singazazi ngakumbi iifowuni kwezi ntsuku zimbalwa zizayo, ke siza kuluhlaziya uluhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Ngaba ujonge ifowuni nge-Android One? Ezi zezo zinikezelwe kwi-MWC 2018